Ornagai for iBooks — MYSTERY ZILLION
Ornagai for iBooks
August 2010 edited October 2010 in iPhone
iPhone နဲ့ iPad ရဲ့ ebook တွေဖတ်တဲ့ iBooks မှာ built-in dictionary တွေပါပါတယ်..။ Mac မှာပါတဲ့ dictionary တွေနဲ့အတူတူပါပဲ..။ English and Japan dictionary တွေပါ။ ကျနော်တို့က ကိုစေတန်ရဲ့ ornagai ကို iBooks မှာစမ်းထည့်ကြည့်ရအောင်..။ အဲ.. Jailbreak လုပ်ထားတဲ့ iDevices တွေမှာပဲ လုပ်လို့ရနိုင်ပါလိမ့်မယ်..။
အရင်ဆုံး Mac အတွက်ပြောင်းပြီးသား ornagai.dictionary ကိုအရင်ယူထားပါ။ ကိုယ်တိုင်ပြောင်းချင်ရင်တော့.. http://www.mysteryzillion.org/forums/showthread.php/8834-Adding-Ornagai-to-Mac-s-built-in-Dictionaries မှာကြည့်နိုင်ပါတယ်..။
• DiskAid - http://www.digidna.net/products/diskaid ( SSH မသုံးလိုသူတွေအတွက် ကောင်းမွန်တဲ့ tool ပါ.. for both mac & windows)
• TextWrangler - http://www.barebones.com/products/textwrangler/ (.plist editor for mac)
• pledit - http://download.cazisoft.com/pledit.zip (.plist editor for windows)
ornagai.dictionary.zip ကိုတစ်နေရာရာမှာ ဖြည်လိုက်ပါ။ ornagai.dictionary ဆိုတာရပါလိမ့်မယ်..။ iDevice တွေမှာ ကျနော်တို့သွင်းလိုက်တဲ့ 3rd party app တွေက Root->User->Applications ဆိုတဲ့ folder အောက်မှာရှိပါတယ်..။ လိုရင်းကတော့.. ornagai ကို iBooks ရဲ့ dictionaries folder ထဲကိုကူးထည့်ပေးရမှာပါ..။ SSH (သို့) တခြား tool တစ်ခုခုနဲ့ပေါ့ဗျာ..။ ကျနော်ကတော့ DiskAid ကိုသုံးပါမယ်။
diskaid ကိုဖွင့်ပါမယ်။ ပြီးရင် Root-> User -> Applications -> xxx -> iBooks.app ဆိုတာကိုလိုက်ရှာပါ..။ ဒီနေရာမှာ xxx ဆိုတာက သက်ဆိုင်ရာ app တွေရဲ့ unique folder name တွေပါ..။ device တစ်ခုနဲ့တစ်ခု မတူပါဘူး.။ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ app name မတွေ့မချင်း ရှာရပါမယ်။ iBooks ကိုတွေ့ပြီဆိုရင် Library အောက်က Dictionaries ဖိုလ်ဒါကိုကြည့်လိုက်ပါ..။ iBooks ရဲ့ built-in dictionaries တွေကိုတွေ့ရပါမယ်..။ အိုကေ.. အဲဒီ dictionaries folder ထဲကို ကျနော်တို့ရဲ့ ornagai.dictionary ဖိုင်ကို drag and drop နည်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်.. diskaid ရဲ့ Copy to Device ကိုနှိပ်ပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ် ကူးထည့်လိုက်ပါ..။ ဒါဆိုရင် တစ်ဆင့်ပြီးပါပြီ..။
နောက်တစ်ဆင့်က.. အခုကျနော်တို့ iBooks.app ကိုနှိပ်လိုက်ပါ..။ ပြီးရင် ညာဘက်မှာပေါ်လာတဲ့ content တွေထဲက BKDictionaryManager_LanguageToOrder.plist ဆိုတဲ့ဖိုင်ကိုရှာပါမယ်..။ အဲဒီဖိုင်ကိုပြင်ပါမယ်..။ ဒီနေရာ နှစ်နည်းရှိပါတယ်..။ ပထမနည်းက ခုနကဖိုင်ကို double-click လုပ်လိုက်ပါ..။ Mac ရဲ့ default program - Property List Editor တက်လာပါမယ်။ Root -> Key အောက်က en မှာ item သုံးခုရှိပါမယ်..။ en ကို right-click လုပ်.. Add Row ကိုရွေးပါ..။ ပြီးရင် ညာဘက်က Value မှာ.. com.apple.dictionary.ornagaien ဆိုပြီးရိုက်ပါ။ ပြီးရင်တော့ Save and Quit ပေါ့..။
ဒုတိယနည်းကတော့.. Text Editor ကိုသုံးပြီးပြင်တာပါ..။ ပန်းသီးအတွက် TextWrangler .. ပီစီအတွက် pledit ကိုသုံးနိုင်ပါတယ်..။ ဒီနည်းမှာတော့ တိုက်ရိုက်ပြင်လို့မရပါဘူး။ .plist ဖိုင်ကို ကိုယ့်စက်ထဲကူးပြီးမှပြင်.. ပြီးရင် idevice ထဲကို overwrite လုပ်ပေးရပါမယ်..။ အောက်ကပုံကိုကြည့်လိုက်ပါ..။
အိုကေ.. အပေါ်ကနည်းတွေအတိုင်း အားလုံးအဆင်ပြေတယ်ဆိုရင် iDevice ကို reboot လုပ်လိုက်ပါ..။ ပြီးရင် iBooks ထဲမှာစမ်းကြည့်ကြပါဗျာ..။ အဲ.. သူက Mac မှာလို အဘိဓာန်အားလုံးတော့ တစ်ခါတည်းမပေါ်ဘူး။ အရင်ဆုံး ornagai မှာရှာမယ်..။ မရှိမှ သူ့ built-in dictionaries ထဲက defination ကိုပြပါလိမ့်မယ်..။ အဆင်ပြေပါစေဗျာ..။ :biggrin:
ဒီနေရာမှာ နဲနဲလေး၀ယ်ပြောမယ်နော် ။App တွေ အများကြီးထဲ့ထားတဲ့ လူဆိုသေဘီ:eek:။လွယ်ကူတဲ့နည်းလမ်းရှိတယ်။ iFile ဖွင့်လိုက် ပီးရင် preferences ထဲမှာ Apps name ဆိုတာကို on လိုက် ပီးရင် iFile ထဲကနေ iBook ဖိုဒါရဲ့ ဖိုဒါ name ကိုမှတ်ထားလိုက်ပီးမှ ကျန်တဲ့ Step တွေကိုဆက်လုပ်ရုံဘဲ ဒါမှမဟုတ် Sbsetting ရှိရင် sbsetting ထဲမှာလဲ၀င်ကြည့်လို့ရတယ်။
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ။စာအုပ်ဖတ်နေရင်း ornagai ကို Multitask နဲ့ လှမ်းလှမ်းပြောင်းနေတော့ ကြာတော့ ကိုယ့် Home Buttom ကိုတောင် သနားလာတယ်ဗျာ(Eng skill ကအရမ်းကောင်းတာကိုး )။ခုတော့အဆင်ပြေဘီပေါ့။
အင်း.. ဟုတ်ပါတယ်။ iFile ရှိတဲ့သူတွေ.. သုံးတတ်သူတွေအနေနဲ့ .plist ဖိုင်တွေကို တိုက်ရိုက် edit လုပ်နိုင်ပါတယ်။ သူကပိုကောင်းတာက ပြင်ပြီးရင် idevice ကို reboot လုပ်စရာမလိုပါဘူး..။ Multitask မှာ ibooks ကိုပိတ်ပြီး ပြန်ဖွင့်ရုံနဲ့ dictionaries တွေကိုပြောင်းပြီးကြည့်နိုင်ပါတယ်..။
KoPaing wrote: »
ကျွန်တော့ iPad ထဲက Library ထဲမှာ Dictionaries folder ကိုမတွေ့လို့ပါ.... Library ထဲမှာ Caches,Preferences,WebKit ဆိုတဲ့ folders သုံးခုပဲတွေ့ပါတယ်...
အဲဒါ ornagai dactionary ကိုဘယ် folder မှာထည့်ရမလဲ ခင်ဗျ?
ipad/iphone dictionary တွေက built-in ပါမလာဘူးဗျ..။ ကျနော့်တုန်းကလည်း အရင်ဒေါင်းလုတ်ချရတယ်..။ သိပ်တော့မမှတ်မိတော့ဘူး။ ရှာချင်တဲ့စာလုံးကို အရင်ရွေးလိုက်ပြီး ပေါ်လာတဲ့ menu ထဲက Download Dictionary ကိုရွေးရတယ်ထင်တယ်ဗျ..။ စမ်းကြည့်ပါဦး..။
@prothat , please use unicode or English. Sorry, we are not allow Zawgyi
အကို...Mac Book မရှိတဲ့သူတွေအတွက် stardic format dictionaries တွေကို apple format dictionary သို့ပြောင်းပြီး download link တင်လိုက်ရင် အရမ်းကောင်းမှာဘဲ။ oxford, cambridge, longman, collin စတဲ့ stardict format တွေတော့ရှိပါတယ်။ internet မှာလည်းပေါပါတယ်။ ဒါပေမယ့် apple format ကိုလိုက်ရှာနေတာတော့ တော်တော်လေးကြာသွားပြီး။ google ကလည်းမလုပ်ပေးနိုင်ဘူး။ ဖြစ်နိုင်ရင်တင်ပေဒစေချင်ပါတယ်။
for those who don't have Mac, like me, to get stardict format converted to apple format, appreciate it if any one here can upload some dictionaries in apple format (like oxford, Cambridge, Longman, Collin, etc - these dictionaries in stardict formats are available to download anywhere online. Please let me upload those dictionaries here if someone wants to help out, converting them to apple format using Mac... Thanks